Abasakhulayo Bathola Izicoco Zokufundela Ezombusazwe
Omunye walabo akade befundela ezokulwala ilungelo lolungu.
Abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu lamatshumi amahlanu bakoBulawayo ngoLwesihlanu bathole izicoco zokugqhiba izifundo ezedemocracy ngaphansi kwenhlanganiso yeContemporary Affairs Foundation esekelwa yinhlanganiso yamazwe womhlaba iUnited Nations Democracy Fund kuhlelo obeluqhutshwa ngaphansi kwesihloko estithi “Amplifying Youth Voices in Democratisation.
Abasakhulayo bakoBulawayo laba bathole izicoco zokufundela ukusebenza kwenhlanganiso zamalungelo oluntu eZimbabwe.
Inengi labo alazi njalo kalifinyeleli ekutholeni ulwazi ngamalungelo abo ngenxa yobubi besimo sezombusazwe lakwezenotho.
Ngemva kwemfundiso ejulileyo abayithole ezifundweni ekade ziqhutshwa yinhlanganiso yeContemporary Affairs Foundation (CAF) okweminyaka emibili, abasakhulayo laba baveze ukujabula.
UMqondisi weCAF, uMnunzana Innocent Bastani Ncube, uthe bekungalula ngesikhathi esungula loluhlelo ikakhulu ekutholeni abasakhulayo abaphila lobugoga abangamatshumi amhlanu ekhulwini ethi lokhe besakhangelwa njengabantwana abancane abangeke baphatheka kunhlelo zabasakhulayo.
Osakhulayo, uMillicent Nyathi, othole isicoco esiphezulu ukwedlula abanye uveze ukujabula kanye lokubonga inhlanganiso yeCAF esithi usesazi amalungelo akhe lokuthi uqondakuphi lapho ethe wabhekana lenkinga ezidinga usizo.
Bathole izicoco ezilohlonzi abasakhulayo.
Omunye njalo osakhulayo owenze lez’izifundo, uSiphosenkosi Ncube, ophila lejwabu elilombala ongaphelelanga oyi albino, uthe uhlelo lumcedile njalo usesazi ukuthi noma esiya ekhethweni uzakhetha umuntu onjani.
UTungamirai Magwidi, othole isicoco sesibili, laye uveze ukujabula ngakufunde kulolu hlelo.
Omunye njalo osakhulayo, uPrecious Nyoni, uthi uyathokoza ngalemfundiso ayitholileyo ngoba okwamanje akaselamahloni okuphuma phandle akhulumisane labentanga yakhe mayelana lenhlelo ezehlukeneyo esigabeni sakhe.
Inengi labasakhulayo laba bakhulume kakhulu ngezokuvota besithi yinto esilelayo kubo ukuthi bayifundiswe ezweni lonke jikelele.
Isilinganiso sabasakhulayo eZimbabwe siyedlula amatshumi ayisikhombisa ekhulwini -70% - njalo yibo abakhangelelwe ukuphatheka ngobunengi ekhethweni lomnyaka ozayo.
Ngakho-ke sokusungulwe inhlelo ezithile zokubahlomisa ngemfundiso yokuthi baphatheke ekuhlelweni kwelakusasa labo bangameleli okuyabe kuvela kunkokheli sikhathi sonke.
Abesifazana Bafundiswa Ezombusazwe